दिउँसो सुत्ने बानी राम्रो कि नराम्रो ? अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा जानीराख्नुहोस
प्रकासित मिति : १ श्रावण २०७६, बुधबार प्रकासित समय : २२:११
दिउँसो सुत्ने बानीले रक्तचाप नियन्त्रण
रक्तचापको एकाई एमएमएचजि हो र चापको एकाई पास्कल हो। एचजि भन्नाले पारो वा मर्क्युरी बुझिन्छ। १ मि।मी मर्क्युरी बढ्नु को मतलब १३३।३२२ पास्कल चाप बढ्नु हो। स्वस्थ मानिसको शरीरमा न्युन रक्तचाप ६०-८० एमएमएचजि र उच्च रक्तचाप ९०-१२० एमएमएचजि हुन्छ। बृद्ध उमेरमा अत्याधिक मानिसको रक्तचाप बढ्ने गर्दछ र यसलाई नियन्त्रणमा राख्न औषधी र व्यायामको आवश्यक्ता पर्दछ। दिउँसो निदाउनेहरुको रक्तचापमा नियन्त्रण हुनको साथै यस बानीले मानसिक तनावबाट मुक्त हुन पनि मद्दत गर्दछ।
कसरी सुत्दा शरिरलाई सहज हुन्छ
सुत्ने धेरै तरिकाहरू छन्- ढाड तर्फबाट, छाती तर्फबाट, दायाँ फर्केर र बायाँ फर्केर-र यो सबैले तपाईँको स्वास्थ्यमा असर गर्दछ। माथि फर्केर अथवा ढाड तल पारेर सुत्नु विशेष गरी दम भएकाहरूको लागि खतरनाक हुन्छ, किनकी यसरी सुत्दा तपाईँको स्वासप्रश्वासमा बाधा पुर्याउँदछ। तथापि उत्तानो परेर सुत्नु सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ।
लसीका प्रणाली भनेको के हो ?
लसीका प्रणाली भनेको शरीरको सञ्चार प्रणालीको एक महत्वपूर्ण अङ्ग हो साथै प्रतिरक्षा प्रणालीको अत्यावश्यक भाग हो। यो लसीका प्रणाली विभिन्न लसीका वाहिका हरूको समग्र नेटवर्कले बनेको हुन्छ जसले लसीका तरल पदार्थलाई (लिम्फ’- ल्याटिन भाषामा ‘पानी) मुटुको दिशातर्फ पुर्याउने काम गर्दछ।